DEG-DEG: Baarlamaanka Somaliland oo gacanta iskula tagay, & Xildhibaan la xiray – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DEG-DEG: Baarlamaanka Somaliland oo gacanta iskula tagay, & Xildhibaan la xiray
December 13, 2021 Xuseen 7
Xildhibaanada Golaha Wakiillada Somaliland ayaa maanta gacanta iskula tagay, kaddib dood adag oo ka dhalatay xeer la horkeenay Baarlamaanka, kaas oo dhigaya in dib loo furo axsaabta Somaliland.
Xildhibaanada maxaafidka ah iyo mucaaradka ayaa isku gacan saaray gudaha xarunta Golaha, waxaana furitaanka kulanka Golaha Wakiillada hareeyay jahwareer, iyo buuq, iyadoo mararka qaar la maqlayay dhawaqa rasaasta oo ay ridayeen ciidammada Booliska oo gudaha u galay xarunta.
Sidoo kale, Booliska Somaliland ayaa xabsiga u taxaabay Xildhibaan Xuseen Aadan Cabdi oo ka kamid ah Baarlamanka Somaliland.
Xisbiyadda mucaaradka ah ee WADDANI iyo UCID ayaa si adag uga horyimid xeerka dib u furista axsaabta Somaliland, kaas oo ay dabada ka riixayso xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana ay sheegeen in haatan la taagan yahay waqtigii doorashada Madaxweynaha aysana macquul aheyn in dib loo furo axsaabta siyaasadda.
Barlamaanka Somaliland waa mid xor ah, oo xisbiyo ku xidhan oo aan iska lahayn nin, kumanaan qof baa doortay, kuma iman doorasho afartan qof oo afka duubtay iyo igu shubo. Markaa gacan ka hadal waa ina daan weyne, Brazil iyo Japan illa Talyaaniga baa gacanta la isa saaraa, rubber stamp ma aha, Hillaacow, ama Ilma gareen iyo manat 2 sano ii kordhiya, maya haddana iga qaada, sida dumarka marba dhan loo dhigo, cuqdada iyo xaasidku waa hubka qudha ee gacantaada ku hadhay,intaana waa kuu oggolahay
Waar hinaasaha iyo Suuraha Dumarka ku caana,
Dhaqan dumarka Iska jooji,,
Somaliland waat ku walacday sida Kan Doqonka ah ee cuqdadeysan BARRE,
SOMALILAND ragii kaadidooda usoo cabay way joogaan iyo weliba kuwa ay dhaleen markaa ciil iyo Catow iyo hadal niic waxba kaga qaadi maysaan naftiina Ha Hiifina oo yaanay xanuun idinku noqon Nacaybkaa aad la eldaran tihiin,,
Si kasta oo ay u bood-boodo (sidii rahii) & si kasta oo ay u firig-firiglayso (sidii caana-qubtii) GOROYO noqon weyday HAAD!
Waligeed baarlamaanka Puntland waxan oo kale kama dhicin. Isaaq waxaa lagu ogaa ari la dulaalo & jaad, dawladnimo shaqo kuma laha umana dhalan.
Af Nooli waa hadlaa eeyna waa ciyaa, baralaanka ku dhufsashada ah waa la yaqaan, kan Puntland miyaan lagu dilin inamadii Warsangeli iyo dibadda loo tuurin Dhoobo daareed, adeer ma caruur baad la hadlaysaa, dhiiggii inamada warsangeli oo yaala miyaan doorasho iyo shir ka dhicin. Miskiin xishood baan Jirin, Barlamaanka Somaliland wuxuu ku imid Doorasho hal qof hal cod, malaha dawladdnimada waxaad u taqaan dictator iyo cashuur la cuno iyo Fahad Yaasiin iyo 28 kun african ku waardiyeeye iyo hablo yaryar oo sidii IKRAAN Ła kufsado oo Ła dilo. MACAAN JECEL DHUUXDAY LAFIHII SOOMAALIYA, DACARTAADII BAA KU HURAN
Warsangelighi looma ooyanka ahaa maydkoodii oo debeda wadhan oo xitaa lasoo aasin sowdinkii ku dul tumanayey ee xitaa qof yidhaahda waar bal maydkan wadhan horta aynu soo aasno kadib hala kala boobo waxan aad baarlamaan ku sheegayso pintilandi,,
Ceeb bay kugu tahay in aad baarlamaanka xorta ah ee somaliland barbar dhigto xitaa usoo dhaweyso xaafada yar ee gadhoowe waxaan ay walaaqdaan,
Shame on you ducufo ilaa ducufo,